U-Anne Rice: i-biography kunye neencwadi zakhe ezilungileyo | Uncwadi lweNdaba
Umthombo: La Razón
Umhla weshumi elinanye kweyoMnga uye wavuka ngeribhoni emnyama kwihlabathi loncwadi. Kwaye kukuba omnye wababhali abaziwayo kwihlabathi liphela, U-Anne Rice uye wasweleka ngenxa ye-stroke. Unyana wakhe nguye okhuphe iindaba ezibuhlungu:
“Kuyophula intliziyo yam ukunazisa ukuba kwangethuba ngokuhlwa kwanamhlanje uAnne usweleke ngenxa yeengxaki ezibangelwa sistrowuku,” ucacise watsho unyana wakhe uChristopher kumajelo onxibelelwano. Wayeneminyaka engama-80 ubudala. Umbhali uya kungcwatywa kwi-mausoleum yosapho kwi-Metairie Cemetery eNew Orleans kumsitho wabucala. Kuya kubakho uLestat, noLouis, noPandora, kwaye, njengesiqhelo, uStan owabhala wathi: “Beka umlomo wakho kum. Zilahlele emibaneni nasekutsha, kuba uloyiko luzizigcawu zento eyenzekayo emva kokufa.
1 Anne Rice, ukumkanikazi wamavampires
1.1 Ubuso bakhe njengombhali
2 Iincwadi ezilungileyo zika-Anne Rice
2.1 Udliwanondlebe kunye nevampire
2.2 Umama okanye uRamses uqalekisiwe
2.3 ITetraloji yoBubuhle bokulala
Anne Rice, ukumkanikazi wamavampires
Umthombo wesithombe se-Anne Rice: elperiodico
Ngaba uyazi ukuba u-Anne Rice wayengelona igama lakhe lokwenyani? Wazalelwa eNew Orleans ngo-1941 kwaye igama lakhe yayinguHoward Allen O'Brien. Noko ke, ekubeni wayemncinane wayefuna ukubizwa ngokuba nguAnne. Kwakhona wayewathanda ngokwenene amavampire namagqwirha.
Malunga nobomi bakhe bobuqu akukho nto ingako eyaziwayo ngaphaya koko Ngo-1961, xa wayeneminyaka engama-20, watshata nembongi kunye nomzobi uStan Rice Wayeneminyaka engama-41 kunye naye, de wafa ngoDisemba 11, 2002 (ewe, ngaloo mini kunye nenyanga yokuba u-Anne Rice wafa).
Ngenxa yomtshato, kwazalwa abantwana ababini, uMichelle, owafa ngelishwa eneminyaka emihlanu ngenxa ye-leukemia; noChristopher Rice, owalandela emanyathelweni kanina nobenguye othe waxela ngokufa kwakhe.
Ubuso bakhe njengombhali
Kwinqanaba loncwadi, U-Anne Rice akazange abhale iincwadi zakhe kuphela phantsi kweli "pseudonym", kodwa abaninzi ngakumbi baziwa njengo-Anne Rampling okanye i-AN Roquelaure (le ngokukodwa imixholo yabantu abadala).
Incwadi yokuqala eyakhokelela umbhali kwimpumelelo yaba Udliwanondlebe kunye nevampire, eyabhalwa ngowe-1973, nangona yapapashwa kwiminyaka emithathu kamva, ngowe-1976. Yaba yimpumelelo leyo kangangokuba bade bagqiba kwelokuba bakhuphe ifilimu esekelwe kwincwadi eyayisenza iivampire zibe sefashonini. Le yayiyincwadi yokuqala kwisaga, iVampire Chronicles, kunye neyokuqala emithathu yatshintshwa, nangona kukho umsantsa omkhulu phakathi kweyokuqala neyokugqibela.
Le ncwadi yokuqala, kunye nabaninzi abayibonayo kamva, ekubeni kuthiwa ubhale iinoveli ezingaphezu kwama-30 kwaye amabali amaninzi kunye neencwadi kunye nezinye ii-pseudonyms azizange zingabonakali. Ngapha koko, kuthiwa abalandeli abaninzi bamise inkampu ngaphandle kwekhaya lakhe ukuze bambone kunye / okanye bathethe naye xa ephumile, ngakumbi xa esiya kwimisa.
Liyinene elokuba, kwiminyaka yakutshanje, akakhange abhale nto ingako, kungekathethi nto ingako ngaye, ukongezelela koko kukho intwana encinane adibene nayo ngokuphathelele uphononongo olungakhiyo apho amagama awasebenzisileyo nendlela abhekiswa ngayo kuye. abafundi bakhe abazange baphumelele kakhulu.
Kodwa inyaniso kukuba italente awayenayo ngokungathandabuzekiyo, kungekhona nje ukuxelela amabali apho i-vampires yayiyi-protagonists yamaphepha kunye nezicwangciso, kodwa unokufezekisa okufanayo kunye nabanye abaninzi abalinganiswa.
Iincwadi ezilungileyo zika-Anne Rice
Nokuba ubumazi u-Anne Rice ngaphambili, okanye usanda kufumanisa umbhali, akungabazeki ukuba, Phakathi kweencwadi zakhe ezininzi, kukho ezinye ekufuneka siziqaqambise kwimpumelelo ababenayo ngexesha labo xa bephuma ngokwezimvo ezintle zabafundi. Emva koko, ngabo abenza u-Anne Rice umbhali owaziwa kakhulu kwi-paranormal subject.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezo ncwadi?
Udliwanondlebe kunye nevampire
Udliwano-ndlebe nevampire ...
Siqala ngodliwano-ndlebe kunye ne-vampire, eyokuqala ye-saga Iidayari zevamphaya, kuba ngexesha lokuphuma kwayo yayiyi-boom. Ukuya kwinqanaba yenza ii-vampires zibe nefashoni ngelo xesha, kwaye kwakhona xa i-movie yaphuma.
Kuyo sifumana i-vampire ethatha isigqibo sokunika udliwano-ndlebe kwintatheli apho afuna ukuxelela ubomi bakhe bonke, ukususela ngaphambi kokuba abe yi-vampire de kube ngulo mzuzu xa wayebalisa ibali lakhe.
Umama okanye uRamses uqalekisiwe
Umama (okanye uRamses ...
Le ncwadi yenye apho "i-vampires" ingabonakali kwaye inokukothusa kancinane xa uthelekisa noko kusetyenziswe ngu-Anne Rice kuthi. Kodwa inyaniso yeyokuba ngomnye wababhali abagqwesileyo, kangangokuba, xa ufika kwindawo ethile, awunakuyeka ukuyifunda de uyigqibe.
Kule meko, Nangona le ncwadi ibonakala ngathi i-Egypt yamandulo, inyaniso kukuba iqhinga alenzeki apho, kodwa eLondon naphakathi kwekhulu lama-XNUMX.. Enye yeenoveli zothando ezinecebo elinjalo lokuqala ukuba ungalibali.
ITetraloji yoBubuhle bokulala
Ukuxhwilwa kuka Buhle...
Kule meko, awuyi kukwazi ukufumana ezi ncwadi ngamagama azo, kodwa ngegama lazo, AN Roquelaure. Iqulathe: Ukuxhwilwa koBubuhle bokulala; Isohlwayo sokulala Ubuhle; Ukukhutshwa kwe-Sleeping Beauty; kunye noBukumkani bokulala Ubuhle.
Yiyo itetraloji evuselela inkanuko, kungoko engazange ayipapashe phantsi kwegama lakhe lesiqhelo. Kodwa ibaliswa kakuhle kwaye ixelelwe ukuba ikugcina ungaqiniseki kwaye yenye yeenoveli ezilungileyo kakhulu enazo.
Straddling BDSM kunye nenkanuko yesini, umbhali wadala ukuqhubeka ibali labantwana. Kuphela, kule meko, akunanto yakwenza nayo.
Le yenye yeenoveli aziqukumbelayo athi, njengaleyo yangaphambili, ayipapashe phantsi kwelinye igama elingusinga. Kwaye kule unokubona enye "inkalo" yombhali, apho uxelela ibali apho isondo sasiyi-taboo kwaye abalinganiswa banomlutha kakhulu.
Libali lika-a umzobi wabantwana kunye nentombazana encinci, engekafiki kwishumi elivisayo, oko kugqiba ukubamba intliziyo yokuqala. Ukuya kwinqanaba lokuba ubudlelwane abaqala ukuba nabo bungaqhelekanga kangangokuba bugqithise imida.
Kwaye kukho iinoveli ezininzi ngakumbi ngu-Anne Rice, kodwa eli lixabiso lethu elincinci. Zeziphi onokuzicebisa? Zeziphi ezikumakisileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Anne Rice: engobomi kunye neencwadi zakhe ezilungileyo